Dawladda iyo maamulka taageera ayaa oggolaaday
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah shaacisay in la qabanayo doorashooyinka dadban ee sannadka 2020-21 iyadoo khilaafyo ka taagan yihiin hannaanka doorashada ee Soomaaliya
Villa Soomaaliya iyo maamulada ku xiran, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo HirShabeelle, oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxay ku heshiiyeen doorasho hal dhinac ah.
Wasiirka iyo hogaamiyayaasha maamulkaasi ayaa si wada jir ah u duubay muuqaal ay ku shaaciyeen inay galayaan u diyaar garowga doorashada la isku haysto ee Soomaaliya.
“Raysul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay Madaxweynayaasha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Filish. ku dhawaaqday in dowladdu ay go’aansatay ka qayb qaadashada hirgelinta doorashooyinka, si loo ilaaliyo waqtiga sidii looga dhigayo Soomaaliya, Qoraal ka soo baxay xafiiska raiisul wasaaraha ayaa lagu yiri.
Bayaanka laguma sheegin in wada hadalada ay ku lug leeyihiin Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo iyo Taliyaha Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo iyagu fure u ahaa go’aanka, sida laga soo xigtay ilo ku dhow Villa Soomaaliya.
Go’aanka ay madaxdu ku gaareen kulan wada jir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa ah in Koofur Galbeed, Galmudug iyo HirShabeelle ay qaban doonaan doorashada baarlamaanka.
Sidoo kale, waxay isla garteen in xulista wakiilada maamulka Gobaladda Waqooyi ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka lagu qabto magaalada Muqdisho.
Wadahadalladii ayaa ku guul darreystay dowladda iyo maamullada Puntland iyo Jubaland oo ka walaacsanaa tabashooyinka dhaqan gelinta heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii Sebtember.
Qodobada la isku haysto ayaa kala ah; guddiyada doorashada ee la magacaabay waxay farageliyeen Villa Somalia, howsha xulista xubnaha baarlamaanka ee gobollada waqooyi, iyo ciidamo la geeyay Gedo, taasoo caqabad ku noqotay awoodda ay Jubaland u leedahay inay maamusho doorashooyinka baarlamaanka sida maamulada kale.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo Saciid C / laahi Deni oo ku sugan caasimada Puntland ee Garoowe ayaa lagu wadaa inay goor dhow la hadlaan warbaahinta si ay u cadeeyaan go’aankooda ku aadan doorashada hal dhinac. ku dhawaaqay Dawladda iyo maamulka taageeraya.